Covidien-19 Saameynta Turkey ee Difaaca iyo Aerospace Warshadaha | RayHaber | raillynews
[28 / 05 / 2020] Goorma ayaa wicitaanada iyo soosaarashadu bilaabmayaan?	06 Ankara
[28 / 05 / 2020] Horumarinta Flash ..! Kor u qaadista Munaasabadda Tareenka Korantada Qaranka ee Tareenka ayaa la joojiyay	54 Sakarya
[28 / 05 / 2020] Ardayda Galeysa Imtixaanka YKS! Imtixaanka Cilmiga tooska ah ee internetka laga helo ee loo yaqaan "MEB"	GUUD
[28 / 05 / 2020] 1 Bilyan Euro Deegaanka iyo Mashruuca Kaabayaasha ka socda Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka	GUUD
[28 / 05 / 2020] Khadka taleefanka ee ALO 183 Waxaa Lagu Soo Bandhigay Adeegga Muwaadiniinta	06 Ankara
HomeGUUDCovidien-19 Saameynta Turkey ee Difaaca iyo Aerospace Industry
Covidien-19 Saameynta Turkey ee Difaaca iyo Aerospace Industry
30 / 04 / 2020 GUUD, cimilada, Headline, ISDIFAACA, TURKEY
Covidien ee difaaca iyo warshadaha aerospace turkey caalamka iyo saamaynta
Qeybta Warshadaha Difaaca iyo Duulista ayaa sidoo kale qeybtooda ka heshay waxyeelada uu keenay viruska Corona, kaasoo ku faafay adduunka oo dhan, kana soo bilaaba Shiinaha. Soosaarka, keenista, caruusadaha iyo heshiisyada ayaa la joojiyay fayraska dilay kumanaan qof.
Dhacdooyinka ku dhaca dhinaca sahayda ayaa laga yaabaa inay yihiin saameynta ugu muuqata ee saameynta dillaacday ee ku faafaya waaxda difaaca. Shirkadaha ku tiirsan silsiladaha sahayda ee wadamada uu cudurku ka dhacay ama wadamada ay dhibaatadu saameysey waa dhibanayaashu. Yurub dhexdeeda, oo hadda loo yaqaan xarunta fayraska, dhibaatooyin halis ah ayaa laga soo maray. Shirkadaha maraakiibta sida Fincantieri ee Talyaaniga iyo Navantia ee Spain waxay go’aansadeen inay joojiyaan mashaariic badan. Shirkado badan oo difaaca Yurub ah ayaa la kulmi doona isu dheelitir la'aanta safka wax soo saarka iyo keenida sababta oo ah mashaariicda go'aansaday inay gebi ahaan ama gebi ahaanba joojiyaan.
Shirkadaha Difaaca Weyn
Fayraska Corona, oo si qoto dheer u saameeyay adduunka oo dhan, wuxuu sidoo kale ku dhuftay kaydka kooxaha warshadaha difaaca. Kaydka shirkadaha sida Lockheed Martin iyo Leonardo waxay la kulmeen hoos u dhac aad u daran. Saamiyada qaar ka mid ah shirkadaha gaashaandhiggu waxay ku ganacsanayaan sicirka ugu hooseeya shantii sano ee la soo dhaafay. Tani waa xaalad cabsi leh. In kasta oo uusan wali saameyn ku yeelan suuqyada sare, natiijooyinkeeda aan tooska ahayn waxay keeni kartaa dhibaatooyin daran. Shirkadaha qorsheynaya inay soo saaraan saamiyo si ay u maal gashadaan maalgashikooda waa inay dib u dhigaan fikradaha ku jira sawirka halista ku jira. Xaaladda kale ee welwelka leh ee shirkadaha waa; ururada qaar ayaa iibsan kara saamiyo raqiis ah, taasoo keenaysa in shirkadaha qaar ay lumin waayaan ama ay la wareegaan. Shirkadaha gaashaandhiggu way soo celin karaan kaydkooda si ay uga badbaadaan shilalka noocaas ah. Si kastaba ha noqotee, tani waxay u horseedi doontaa shirkadda inay bixiso lacag badan oo laga yaabo inay lumiso dareere marka loo baahdo.
Corona Saamaynta dalka Turkiga
Marka waaxda Difaaca iyo Duulista Hawada la baaro iyadoo la fiirinayo tirooyinka dhoofinta saddexdii bilood ee hore ee 2020, waxay umuuqataa in muggeedu hoos u dhacay marka la barbar dhigo sanadkii hore. Markii fayrasku bilaabay inuu ku faafo waddankeena bishii Maarso, saamaynta xun ee Corona way cadahay.
data Golaha Turkey dhoofinta marka ka qaybta Aerospace iyo Difaaca Industry viewed, sida in bilood ee hore ee 2019 614.718 $ Milyan ayaa lagu ogaaday in tirooyinka, in bilood ee hore ee 2020 482.676 $ Million 'in ay hoos dheceen. Haddii aan u baahanahay inaan isbarbar dhig ku sameysanno inta u dhexeysa rubuc koowaad ee sannadka 2020 iyo 2019, waxaa la arkaa inay jirto hoos-u-dhac.21.5%. Markaan fiirinayo xogta Maarso; Muuqaalka dhoofinta ee bishii Maarso, oo ahayd $ 2019 milyan sanadka 282.563, wuxuu hoos u dhacay $ 2020 milyan sanadka 141.817. Tani waxay muujineysaa in isweydaarsiga bisha Maarso ee udhaxeysa labada sano uu ku dhowaaday inuu kalabar goos goos ah -49,8%.
Kardemir oo xabbad-joojin siiya warshadaha difaaca
Saamaynta Covid-19 ee Warshadaha Eskişehir
Saamaynta Covid-19 ee Baadhista Gaadiidka Magaalada Istanbul
Saamaynta Covid-19 ee Dhaqaalaha waxay socon doontaa ugu yaraan Hal sano
EGİAD Waxay Qiimeyneysaa Muuqaal macquul ah oo dhaqaale oo ah Covid-19 oo leh Webinar
Taageero ka timid BEBKA ilaa garoonka diyaaradaha, tareenada iyo difaaca
BEBKA oo loo wareejiyo Gargaarka Warshadaha Soomaliya ee Bursa
TÜLOMSAŞ waxay ku dareysaa qiimaha tareenada Turkiga
Warshad Konya ah oo garaacday mashruuca taraamka
Taageerada BEBKA waxay bixisaa Nolosha Eskisehir Warshadaha
ITSO Amisom Eskisehir Warshadaha
Tababar ku saabsan Liberalization iyo Saamaynta Gaadiidka Tareenka - Martiqaad Raadin ah
Wasaaradda Gaadiidka ayaa sheegtay inay Joojiso iibinta Tigidhada Basaska Qiimaha Lacagta
Wadashaqayn lala yeesho ASELSAN oo loogu talagay Signal Railway oo ka socota Jaamacadda Ganacsiga Magaalada Istanbul
Terminal Airport-ka Istanbul wuxuu Noqday Dhismaha Shahaadada dahabiga ee LEED ee ugu Weyn Caalamka
Wasiirka Karaismailoğlu: 'Wax Kordhin Kusoo Bandhigida khidmadaha Tigidhada'
Jawaabta Deg Deg ah Wadada Iskuxirida Korantada ee Ordu
Fasaxyada Fasaxyada Wadooyinka Caasimadda
Shot koowaad ee Pickaxe ee Etimesgut Istasyon Street
Khad 200 oo Saacado Duulimaad ah ayaa Cusboonaysiiyay
Sonkorta AKP: "Ha walwelin, YHT waxay ku joogsan doontaa Kocaeli"
Eken wuxuu ugu yeeraa Bayraktar in lagu soo saaro National UAV Demirağ OIZ
Shirkadaha Basaska ayaa Duulimaadyo Bilaabanaya June 4
Tallaabada koowaad ee Nidaamka Caadiga ah ee Samsun! Duulimaadyada Tram oo sii kordhaya
Hawlaha ganacsiga Yacht waxaa laga bilaabi doonaa bisha Juun 1 dhexdeeda baaxadda Nidaamka Caadiga ah
Ogeysiiska Udiridda: Howlaha Wadada Tareenka Ayaa La Dhameysan doonaa - Diyarbakır Kurtalan Line
Maddaarka Istanbul, oo ah HUB caalami ah sanadkiisii ​​ugu horreeyay oo leh qaab-dhismeedkiisa u gaarka ah, kaabayaasha adag, tikniyoolajiyadda sare iyo waayo-aragnimada safarka oo heer sare ah, ayaa leh guul cusub. [More ...]
Wasiirka Gaashaandhigga Qaranka Hulusi Akar ayaa ku dhawaaqay in yeedhiska iyo hoos-u-dhigista ay bilaabmi doonto 31-ka May. Sida ku xusan bayaanka ay soo saartay Wasaaradda, waxaa gudoomiye u ah Wasiirka Gaashaandhigga Qaranka Akar, Taliyaha Guud ee Ciidamada Gen. Yaar. [More ...]
Covid-19 waxay xambaartaa Shabakada SAHA Istanbul ee Wadashaqeysa Dunida dhijitaalka ah
Marka la eego baaxadda Gawaarida Ganacsiga ee Bursa, Shaqada Jirka, Superstructure iyo Shirkadaha Soo Saara Qeybta UR-GE oo ay fuliso Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee BursO (BTSO), sanadkan, Mareykanka [More ...]
Darawalka IETT Ahmet Köse, oo lagu daweeyay cudurka Covid 19, ayaa xaq u leh howlgab inta uu kasoo kabanayo. Hawshan, Ahmet Köse, oo codsiga u keenay hay'adda, ayaa sii waday dawayntiisa. [More ...]
Saameynta Buundada Canaaq ee Lapseki ayaa laga wada hadlay
Turkey ee Tababarka Civil Aviation ee Tababarayaasha ee Hale Future
Liberalization in Railways iyo Saameyntooda ku saabsan Dhaqaalaha Global!
Aviation Area noqday World ee sida dhaqsaha badan Koraaya dalalka Turkey
Canshuurta Isweydaarsiga Dibadda: Sicirka Canshuuraha ee Isdhaafsiga Dibadda iyo Macaamilada Lacagta Dahabka ayaa ka korodhay 2kiiba kun ilaa 1 Boqolkiiba! Waxay bixin doontaa $ 100 Canshuur oo $ 1 ah